CAYAYAANKA UGU CAANSAN EE ORCHIDS IYO KANTAROOLKA WAX KU OOLKA AH IYAGA. - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Sida loola tacaalo cayayaanka orchids
Qaar badan oo dhirta qalaad ayaa maanta caan u ah beeralayda ubaxa. Orchids waa ka reeban yihiin. Markaad doorato dhirta aad jeceshahay, ugu horreyn waxay eegaan caleemaha, laamaha iyo peduncle, illowday in ay eegaan dhulka. Keenista guri dufan leh ubax, iibsadaha badanaa wuxuu keenaa cayayaanka orchid ee hore u jiray carrada. Waxaan si taxadar leh u tixgelineynaa dulinada iyo hababka looga hortagayo.
Whitefly waa balaadhin yar oo caddaan ah oo dhigaya ukumaheeda hoose ee caleenta ama caleenta hoosteeda. Dirxiga khafiifka ah wuxuu cunaa caleemaha, taas oo keenaysa waxyeello geedka. Moobeytida warshad waa wakhti qashin ah: gogol-xannibaadyo si deg deg ah oo bakhti ah oo aan waxyeello u geysan. Si aad uga takhalustid, u dhaqdhaqaaq caleemaha, kuna duub cayayaanka qallalan. Hababka wax ka qabashada dirxiga haray: daaweeya ciidda xalka "Phyto farmaajo" ama "Aktelikt", ku celi daaweynta ka dib todobaadkii. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhaqo caleenta biyo ah ugu yaraan shan maalmood. Nidaamka dadweynaha ee la tacaalaya orchids -ka cayayaanka - samee xalka saabuunta oo tirtir dhamaan qaybta dhulka geedka.
Waa muhiim! Inta lagu jiro daaweynta, waa inaad joojisaa quudinta, daroogo badan (gaar ahaan organic) waxay gacan ka geysan karaan dhalmo-abuurka.
Earthworms ayaa inta badan gurguurta dheriyo ku yaal dhulka dhulka ku yaala ama lagu koriyo. Ma waxyeeleeyaan geedka, laakiin waxay sameeyaan bannaanka u walwalsan. Si aad uga takhalusto Gooryaanka, dheriga ku shub weel qoto dheer oo biyo ka buuxsamo, si biyaha u daboolo ciidda dusha. 7-10 daqiiqadood dirxirku waa uu soo baxayaa. Ku dhaji qubeyska toban maalmood kadib.
Ma taqaanaa? Goolashu waa hermaphrodites, waxay ku dhufanayaan iyagoo dhigaya ukumo. Mid ka mid ah cocoon waa caadi ahaan qiyaastii shan ukumood. Goolasha dhawaan dhalaanka ah ayaa nafaqada siinaya, iyagoo sii daaya dadka waaweyn iyagoo daryeelaya naftooda.
Gaadhi iyo gabbaad
Gaashaan-yaraha iyo gaashaanbuurku waa cayayaan badanaa cayayaanka. Ku saabsan joogitaanka sumeeyayaashan ayaa waxay hurumaraan huruud ama huruud, iyagoo hoos fadhiya qof weyn oo shakhsi ah. Dirxiga cayayaanka wuxuu u dhaqaaqaa geedka oo dhan, cabitaanka casiirka iyo caqabadaha horumarinta orchid. Si aad uga takhalusto dulinta, diyaariso xal "Aktellika", sida lagu tilmaamay tilmaamaha, iyo geeddi-socodka geedaha. Dib-u-daaweyn ayaa la sameeyaa toddobaad gudihiis. Warshadu waxay u baahan tahay in lagu beeray dhul cusub, oo ah tallaabo ka hortag ah, biyo iyo dhulkaba biyo raaci. Waxaa jira daaweyn dadweyne si loola dagaallamo cayayaanka kuwa orchids. Nidaam ku habboon dhirta caleemaha cufan ayaa la xoqay leh aalkolka ethyl. Toonta la jajabiyey waxay tirtiri karaan meelaha waxyeellada leh ee ubaxa iyo koritaanka, oo ay ku jiraan qaangaarku ay qarinayaan. Habka saddexaad waa xalka saliid saytuun ah oo biyo ah (2 tbsp. Liters halkii litir oo biyo ah). Waa in lagu dabaqo dhamaan qaybaha kor ku xusan ee geedka oo leh burush loo sawirayo.
Shilinta (caarada caarada iyo cayayaanka)
Caarada Foosto-cad ayaa ah cayayaanka microscopic ee casaanka cas ama jaale ah oo leh dirxiga cagaaran. Waxaad arki kartaa cayayaanka leh dhalada weyn. Ubax faaruq ah ayaa lumiya caleemo caddaan ah. Haddii aan la ogaanin, caleemaha peduncle waxay bilaabi doonaan in ay dhacaan, ma laha inay waqti u helaan ubax. Si aad uga takhalusto cayayaanka ayaa kaa caawin doona inaad ku buufiso "Fitoferm." Heerkulka qolka aan ka badnayn 20 ° Nidaamka ° 0 waa in lagu celiyaa saddex jeer, hal mar toddobaadkii. Haddii heerkulka qolka uu ka sareeyo 30 ° C - saddex ilaa afar jeer oo leh mudo ah saddex maalmood. Isla mar ahaantaana, raaci warshadda iyo ciidda biyo socda shan maalmood.
Caarada caarada ee cayayaanka xayawaanku waxay ku noolaan kartaa waqti dheer, maadaama ay awood u leedahay inay horumariso difaac ka soo horjeeda cayayaanka. Sidaa darteed, ka takhalusi cayayaanka, diyaargarowga beddelka ah. Si loola dagaallamo cayayaanku waxay ku habboon yihiin "Actellic", "Thiofos", "Fitoferm" iyo "Neoron".
Habka ugu caansan: Digriiga Cyclamen googooyaa oo googooyo biyo afartan daqiiqo. Maraq ku adkeyso, ka dibna xaddid oo ku buufi warshadda. Biyo-dhaqidda waxaa la sameeyaa saddex ilaa afar jeer shan jeer shanta maalmoodba. Wixii orchids leh caleemo cufan, tirtir khamriga daawada ayaa sameyn doona. Waxaa jira hal murugo leh: ka hor intaadan tirtirin, tijaabi jawaabta dhirta hal meel.
Sida horey u soo sheegnay, orchid badanaa waxay ka jirtaa cayayaanka carrada, waana lagama maarmaan in la ogaado sida looga takhaluso iyaga oo aan halis u ah inay lumiyaan geedka ama dib-u-soo-boodidda dulinka. Cayayaankaasi waxaa ka mid ah injirta qoryaha. Cayayaanka Tani waxay cunaan wax kasta oo soo baxa sida: caleemaha, laamaha, caleemaha yar yar. Waxaad wax ka baran kartaa muuqaalkooda iyagoo ogaanaya godadka dhirta. Nidaamyada biyaha ayaa kaa caawin doona - dhejin ku dheji ubax qashin qoto dheer oo biyo ah. Biyaha waa inay daboolaan ciidda dheriga ah. Parasitiyada qudhooda waxay ka soo baxayaan dhulka. Ku celi qubeyska isbuuc ka dib. Xaaladda tiro badan oo dulin ah iyo fashilaad ka dhacda nidaamyada biyaha, beddel carrada. Warshad waa inay dhaqdaa xididada.
Habka ugu caansan: Si aad qoryaha uga soo baxdid dhulka, hareeraha meel qashinka ah ee qashinka ka soo gala barandhada cayriin ama tufaaxa.
Mealybug waa khatar sababtoo ah waxaa loo keeni karaa goob caafimaad oo xitaa dabaysha iyadoo loo marayo dariish furan. Nasiib-darradu waxay leedahay fecundity xoog leh oo si deg deg ah ku dhirta dhirta leh boqolaal nooc oo u gaar ah. Duufaanku wuxuu soo saaraa dhammaan nafaqooyinka ka soo ubaxa, iyo nabarrada bidix, waxay ku dhacaan caabuq fungal. Cayayaanka qashin-qubka ah waxaa ku jira shaarib dheer iyo gees cad oo jidhka ah. Aynu ogaanno sida loola dhaqmo orchid guriga marka la weeraro dixirigga. Daaweynta waxay ka kooban tahay dhowr marxaladood:
Ka saar dhammaan qaybaha qallalan ee dhirta - waxay u adeegaan sidii hoyga loogu talagalay dulinka.
Ugu yaraan laba jeer maalintii, kormeer iyo ka saar cayayaanka la ogaaday, oo dhaawaca nabarrada biyo saabuun leh.
Demi carrada iyo qaybta hoose ee warshadda leh diyaarinta "Fitoferm". Toddobaadkii, ku celcelinta moobeylka.
Biyo raaci carrada iyo caleemaha ubaxa oo biyo socda shan maalmood, iyo biyuhu waa inay diirranaadaan.
Haddii bil gudaheed aysan jirin calaamado cayayaanka, waxaad ka takhalustay. Qaababka dadweynaha: dhajinta xalka saliid saytuun ah (2 tbsp.) halkii litir oo biyo ah. Xalka saabuunta (15 g oo ah dareeraha), aalkolada (10 ml) oo biyo nadiif ah (1 l) ayaa caawin karta. Doorashada labaad ma aha mid ku habboon dhirta leh caleemo dhuuban.
Rootbird - Bukaan-socodka ku yaala orchid wuxuu waxyeeleeyaa nidaamka xididka ubaxa. Cayayaanka wuxuu leeyahay jirka oo ka kooban laba illaa 4 sentimitir, huruud, hurdi ama casaan. Natiijada noloshiisa, dhirtu way baaba'aysaa oo way dhimataa.
Orchid qaba cudurka waxaa laga saaraa dheriga, xididdada si fiican u maydheen oo la waraabiyay xal daciif ah ee kaneecada. Marka nidaamka xididka uu ku qalajo, geedka waxaa lagu beeraa ciid cusub, ka hor-jeermiska dheriga. Substrate waa in la tuuraa. Hab kale oo kale waa in la gooyo ciidda iyadoo leh cayayaanka budada ah ee qalalan. Markaad biyo dhasho, kaneecada ayaa ka soo horjeeda biyaha, waxay ku uruurisaa xididada kiimikada. Maqsinka, cunista cabitaanka sunta, waxay u dhintaan.
Goobta caleemaha waa cufan ama caleemo yaryar oo ku dhex nool carrada oo ku quudiya walxahaas. Kaluunka waa kuwa ugu waxyeellada cayayaanka ee orchids, laakiin sidoo kale waxay u baahan yihiin in la waxyeeleeyo lana daweeyo. Qadar yar, cayayaanka waxay ku quudiyaan wixii ay ka heleen ciidda, iyo ka dib marka la beero, haddii ay jirto yaraanta nafaqooyinka ee ciidda, waxay u beddeli karaan caleemaha xidid dhalinyaro.
Iyada oo muuqaalka muuqaalka madow, ku daawee diyaarinta "Fitoferm", adigoo tixraacaya tilmaamaha. Ku celi qalliinka ka dib todobaadkii. Si looga hortago, daawee meesha uu dheriga ku hayo xayawaanka bakteeriyada ka sameysan, ha u oggolaan in dhererka la dhaafo.
Nematodes waa gooryaan yaryar ilaa laba millimitir, way adag tahay in si dhakhso ah loo baaro. Iyadoo muddada dheer ee dulinka ku dul yaalliin orchid, dhirta waxaa laga helaa sunta qashinka ee cayayaanku. Tartiib tartiib ah, orchid ayaa lagu daboolayaa taabashada iyo dhimashada.
Dhirta cudurka qaba waa in laga saaraa ubaxyo kale. Daaweyn, qoyi kiniinka ku jirta litir biyo ah oo leh kiniin bidix oo bidix ku shub oo ciidda ku dul dar. Ku soo celi toddobaad gudohood. Hab kale - daaweynta biyaha ee biyaha leh heerkul ah 40 darajo. Nematodes waxay u dhintaan heerarkan.
Waa muhiim! Hannaanka biyaha ee kulul biyaha waa in la sameeyaa iyadoo la daryeelayo in aan waxyeeleynin geedka.
Aphid on orchid - sidaha cudurada. Si sahlan ayaad u ogaan kartaa isla markaaba si deg deg ah uga takhalus.
Cayayaanka, quudinta on dheecaan ee caleemaha, baxo ka dambeeya unug jirka ah oo la daboolay walax adag. Miisaankaas xajmiga leh, xayawaanka fungus madow ku dhufto waqti leh. Daaweyntu waxay ka kooban tahay sunta cayayaanka.
Waxaad la qabsan kartaa aphids iyadoo la adeegsanayo hababka caanka ah. Diyaarso diyaarinta basasha: basasha dhulka ah waxaa ka buuxsamey biyo karkaraya waxaana la isku daraa toddoba saacadood. Markaas faleebo waa in la miiro oo buufiyaa dhirta. Samee nidaamka dhowr jeer maalintii afar maalmood. Habka labaad: ku dhaq warshadda leh xal sigaar ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa faleebo qashinka ah ee citrus kasta. Shub dhalada (100 g) leh litir biyo ah oo ka bax saddex maalmood. Daadi midka orchid shan saacadood kasta shaybaarka. Roobka qallalan waxaa la gelin karaa dhulka oo ku wareegsan hareeraha ubaxa.
Xiiso leh Aphids waxaa loo yaqaanaa lo'da. Qudhaantu waxay ururiyaan "cadka" cayayaanka, iyaga oo ka ilaaliya cayayaanka cunnooyinka iyo "caano" lo'da, waxay ku daboolaan calooshooda leh qoryo. Aphids dib u cusbooneysiiyaan nafaqooyinka dhirta iyo iyaga iyaga oo la cabiraya sonkorta inta lagu jiro "duugis", si toos ah afka gala quraan.
Thrips ayaa aan la arki karin sababta oo ah cabbirkooda yaryar - oo keliya 2mm. Kiisku wuu burburin karaa oo keliya caleenta, laakiin sidoo kale xididdada orchid. Thrips waxay dhigaan caruurtooda caleemaha orchid, dirxiga hatched ee ukunta, quudiyo on casiir ah ee dambe. Dhibco madow waxay u muuqdaan ubaxyo, dhogorta caleenta, iyo qaabka koritaanka ee xididada. Haddii wakhtigu uusan ka takhalusin cayayaanku, dhirku wuu dhimanayaa.
Si aad uga takhalustid thrips, waxaad u baahan tahay inaad ku buufin ubax "Aktely" ama "Fitoverm" saddex jeer. Wareegga u dhaxeeya buufinta toban maalmood. Haddii aadan rabin inaad isticmaasho kiimikada, soo saaro basal lagu buufiyo, ama xal saliid saliid iyo biyo.
Slugs iyo shinbiraha
Slugs iyo lafaha ayaa si gaar ah halis u ah dhirta, maadaama ay cunaan dhammaan qaybaha casiir ee orchid. Kiniinnadani waxay jecel yihiin kulaylka iyo qoyaanka, inta badan waxaad u keentaa dukaanka aad dukaanka ku iibsato. Xaaladda snails iyo slugs waxay u baahan yihiin nadiifin taxadar leh. Wixii cayayaanka ku rid bacda: xaleef of tufaax ama qajaar. Marka qallooca maqaarka soo baxo, waxaa la goostay gacanta. Nidaamka aruurinta waa in lagu celiyaa illaa dhammaadka dhammaada. Sigaarku wuxuu ka tagi karaa caruur ka soo baxa saddex toddobaad ka dib, sidaas darteed samee qadar.
Sidaas darteed, waxaad soo iibsatay orchid. Ha ku degdegin inaad ku beddesho oo aad gasho meel joogto ah. Samee qubeys biyo ah: dheriga ku rid weel biyo ka buuxsamo si ay ciidda dheriga u hooseyso biyaha. Waxaad arki doontaa in cayayaanka la soo kaxeeyay iyo in kale. Haddii la keeno, isla markiiba daawee ubaxa, ha u qalajin oo dhirta si habboon loo xushay ciidda. Wixii orchids, phalaenopsis waa carrada ay ku jiraan jilif iyo xoorto. Goobtaas oo kale, orchid waxay dareemeysaa sidii ay xaalad dabiici ah ku dhacday, sababtoo ah dabiiciga ubaxa wuxuu ku koraa dogob ama googo dhintay.